November 2018 – Kalfadhi
November 30, 2018 Kalfadhi
Kadib markii Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya (BFS), oo uu ka mid yahay Guddoomiyaha Golaha Shacabka, ay ka hor yimaadeen ciidan ay maanta Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) geysay Baydhaba, ayaa Wasiirka Amniga Koofur Galbeed, Xasan Xuseen, waxa uu sheegay in DFS ay arrintaas ugu talogashay adkeynta ammaanka gobolkaas, gaar ahaan magaalada Baydhaba. Sida ay SONNA daabacday, waxa uu Mudane Xasan Xuseen ku difaacay DFS in ciidanka ay geysay Baydhabo ay, doorashada kusoo fool leh Koofur Galbeed darteed, sugi doonaan nabadda Baydhaba. “Ciidanka la keenay waxa ay u yimaadeen…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa sheegay in Mukhtaar Roobow Cali uu xaq u leeyahay inuu isu sharaxo xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed. Mursal waxa uu taas sabab uga dhigay inuu Roobow yahay muwaadin, dowladdana ay la gashay hishiis, oo uu isagoo xor waqti badan kula qaatay Muqdisho, haddana uu haysto shahaadadiisa musharaxnimada Madaxweynaha Koofur Galbeed, taas oo ay Guddiigii Doorashada Koofur Galbeed ee iscasilay siiyeen. Mursal, oo la hadlayey VOA-da, ayaa sheegay ineysan sax ahayn iney dowladdu isku daydo iney Roobow ka hor istaagto inuu u tartamo xilka…
November 30, 2018 November 30, 2018 Kalfadhi
Qaar ka mid ah Xubnaha Baarlamaanka Golaha Shacabka, ee ay Deegaan-doorashadoodu tahay Koofur Galbeed, ayaa Dowladda Federalka Soomaaliya (DFS) ka dalbaday iney dib uga celiso magaalada Baydhaba ciidamo la sheegay iney maanta geysay halkaas. Shirjiraa’id, oo ay qabteen, ayey Xildhibaanada Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) iyo Xaniifa Xaabsade ku sheegeen iney ka walaacsan yihiin ciidamadaas. Taas kasakow, waxay baaq u direen AMISOM, si ay dhex dhexaad uga noqato DFS iyo Koofur Galbeed. Beesha Caalamka ayey, sidoo kale, farriin u marsiiyeen shirkooda. Xildhibaanadu waxay shirkooda-jaraa’id ugu gudbiyeen DFS ineysan baabi’in hormarada laga…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, wali kama uusan hadlin qilaafka hareeyey Golaha ee kasoo bilowday War-bixin Miisaaniyadeedka 2018-ka uu Guddiga Maaliyaddu u soo gudbiyey Golaha. Yuusan joogin dalka, laakiin Inuu ismari-waaga taagan ka aamusan yahay ama uusan darteed dib ugu soo noqon dalka, ayey wakiilo badan qabaan iney walaac kale tahay. Dad badan ayaa u haysta inuu Guddoomiye Mursal ku aragti noqon karo La-taliyihiisa Cabdul-qaadir Maxamed Nuur, oo bartiisa Feysbuugga soo dhigay ineysan kala eryidda Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka sharci ahayn. “Doodda ka dhalatay kala diridda Guddiga Maaliyadda ma…
Inta aan isaga taageersanayn ee mucaaradka ah waa qaran dumis weerarkoodu bannaan yahay; saxaafadda runta sheegta waa war-xumo tashiil, xildhibaannada ra’yigooda muujinaya waa kuwa waalan, qaarkood waa kuwo xannaaqsan; kuwo dhibannaa oo halgan hubaysan Itoobiya kula jiray waa argagixiso. Aslanba waxaa ka dhaadhacsan in malaayiin Soomaaliya ah aanay aqoon waddaniyad, asaga ka hor laga ma hadli jirin. Labo sannadood ka hor, gobollada dalka waxaa ka dhacayay dibad baxyo farxad wata oo lagu soo dhoweynayo is beddelka dimuqraadiyadeed iyo xurriyada is doorashada iyo is beddelka xukunka. Adduunka oo dhan baa ammaanay…
Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu la wadaago Baarlamaanka Soomaaliya Cutubyada Dastuurka ee ay dib u eegeen. Guddigu waxa uu hadda diyaariyey 10 cutub oo ka mid ah 15-ka cutub ee dastuurka, kuwaas oo ay horay ugu wareejiyeen Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka. “Waxaan isu diyaarinay sidii aan Baarlamaanka Soomaaliya ugu gudbin lahayn War-bixin Xiliyeedka Guddiga” ayuu yiri Xoghayaha Guddiga Dastuurka u qaabilsan Baarlamaanka Soomaaliya, Senatar Xuseen Sh. Maxamuud. Senatar Xuseen waxa uu sheegay iney 3-dii bilba mar war-bixintaas u geeyaan Baarlamaanka, waxaana ay hadda doonayaan iney…
November 29, 2018 December 1, 2018 Kalfadhi
Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha, Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye, ayaa war ay soo dhigtay barteeda Feysbuugga ku sheegtay inuusan Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, waxba ka bedeli karin go’aankii Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Cabdiwali Muudey, uu ku kala diray Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka. “Imaanshaha Guddoomiye Mursal waxba kama beddeli karto qoraalka uu ku saxiixan yahay Guddoomiye Kuxugeenka 1-aad ee Golaha Shacabka” ayey ku tiri qormada ay Xildhibaanad Khadiija soo dhigtay barteeda bulshada. Iyadoo u duceyneysa ayey Xildhibaanaddu ku tilmaantay Guddoomiye Muudey inuu yahay “Hogaamiyaha Aqlabiyadda Golaha Shacabka”. Wasiiraddu…
November 29, 2018 November 29, 2018 Kalfadhi
Cabdulqaadir Maxamed Nuur, oo ah La-taliyaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu Guddoomiye Mursal waajib ka saaran yahay ilaalinta Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka. Isagoo taas ka duulaya ayuu La-taliyuhu ku soo qoray bartiisa Feysbuugga ineysan sharci ahayn kala diristii Guddiga Maaliyadda. “Doodda ka dhalatay kala diridda Guddiga Maaliyadda ma waafaqsana Xeer Hoosaadka Golaha” ayuu soo qoray La-taliye Cabdulqaadir. Waxa uu sheegay in Guddiga xilka uu haayo uu u dhiibtay Golaha Shacabka, isla sidii uu ugu dhiibtana uu uga qaadan karo waajibka uu saartay. “Maadaama uu Golaha…
November 29, 2018 Kalfadhi
Kadib muddo 3 maalin ah, oo ay Wasaaradaha Dastuurka, iyo Haweenka iyo Hormarinta Xuquuqda Aadanaha shir ugu qabteen Muqdisho dadka naafada ah, haweenka, dadka matalaadda siyaasadeed aan lahayn iyo barakacayaasha, waxaa loogu baaqayaa Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya (DFS) iney ka-qeyb-galayaashii shirkaas oo gobolada ka kala yimid ku difaacdo sharciga. Si arrintaas loogu guuleysto, waxay shirka ay wasaaradaha kor ku xusan qabteen ka soo baxay 11 qodob baaq ka kooban. Waxay ugu yeerayaan Xukumadda iney dardargeliso siyaasadaha iyo shuruucda la xiriira sugidda Xuquuqda iyo Karaamada Aadanaha. Si xal loogu helo…
Xubno ka tirsan Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka ayaa wada soo faggidda qodob kasta oo sharciyadeed, oo ay ku difaaci karaan Guddigooda uu Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Cabdiwali Ibraahim Muudey, ku kala diray shalay war qoraal ah oo uu soo saaray. Qoraal 5 bog ka kooban, oo warbaahinta loo qeybiyey, laguna muujiyey inuu soo diyaariyey Xildhibaan Mahad Salaad (Xubin ka tirsan Guddiga Maaliyadda), ayaa lagu sharaxay qodobbada sharciyadeed ee lagu dhisi karo ama lagu baabi’in karo Guddiyada ama Guddi kasta oo ka tirsan Golaha Shacabka. Isagoo xiganaya Xeer…